Kumbhedele uthisha 'oneziqu zomgunyathi' - Ilanga News
Home Izindaba Kumbhedele uthisha ‘oneziqu zomgunyathi’
Kumbhedele uthisha ‘oneziqu zomgunyathi’
Kuthiwa ithumba laqhumbuka bexabana nesoka lase limpimpa
UMSINGA High School osekuvele ukuthi owesifazane owayebhaliswe njengothisha wakhona ngo-2011, uboshwe ngecala lokusebenzisa isitifiketi esiwu-mbombayi. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UGOJELWE wuphenyo loKlebe emuva kweminyaka ewu-10 “enza” icala uthisha oboshelwe ukusebenzisa izitifiketi zomgunyathi eMsinga.
UNkz Thembisile Phungula (41), okuthiwa waqashwa eMsinga High School ngo-2011, usolwa ngokusebenzisa iziqu zomgunyathi zobuthishela, kanti nesitifiketi sakhe sikamatikuletsheni, sasishayisa ngamakhala.
Ngokuthola kweLANGA, uNkz Phungula wazifaka emanzini abilayo exabana nesoka lakhe, okuyilona elamceba ngalo mgunyathi kwaze kwavulwa icala esiteshini samaphoyisa eDundee, ladluliselwa koKlebe.
Lolu daba lwasukumisa uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, njengoba kubikwa ukuthi alinganiselwa ku-285 amacala aphenywayo mayelana nezinsolo zokusebenzisa iziqu ezingekho emthethweni.
Umthombo weLANGA owazi lolu daba, uthi lezi ziqu zazithengwa kowesifazane wakhona eMsinga, okubikwa ukuthi akasekho emhlabeni.
Kubikwa ukuthi ngokwamarekhodi omnyango, uNkz Phungula wafundisa unyaka owodwa eMsinga High yize engekho othi wake wambona emi phambi kwabafundi balesi sikole kwathi uma sekuqhuma ingqumunga, wayoqala phansi wayofunda ngokusemthethweni.
Njengamanje uqashwe ngokugcwele eBarnhill Primary School, eMsinga. Umthombo waleli phephandaba owawufundisa kulesi sikole ngesikhathi okuthiwa uNkz Phungula wayefundisa ngaso, ukubeke kwacaca ukuthi akazange afundise kulesi sikole.
Uthi waqashwa emuva kwesivumelwano nothishanhloko wakwesinye isikole.
“Sasifuna uthisha weConsumer Studies kwase kufika kimina uyise walo thisha (uNkz Phungula), wathi kunengane yakhe ehleli ekhaya engasebenzi, kodwa inazo izimfanelo.
“Inkinga kwaba wukuthi uthisha akanaso lesi sifundo engisifunayo kanti kwesinye isikole esisendaweni, kwakukhona uthisha wangaphandle kwakuleli zwe owayethi akathandi ukufundisa emabangeni aphansi, kwasho ukuthi lowo thisha unakho lokhu esifukunayo.
“Ngaleyo ndlela kwavunyelwana ngokuthi bashintshane. Impela ngokwamaphepha, wayekhonjwa eMsinga High, kodwa engekho khona siqu sakhe,” kusho lo mthombo.
Okhulumela oKlebe KwaZulu-Natal, uCapt Simphiwe Mhlongo, uthe uNkz Phungula udedelwe ngebheyili ka-R2 000, icala lakhe lihlehliselwe umhla ka-26 kuNhlolanja (February) kuwona lo nyaka.
Imali eyalahlekela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uholela uNkz Phungula, ilinganiselwa ku-R122 493-00.
Okhulumela umnyango KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe othisha bazi kahle kamhlophe ukuthi kumele bathembeke. Uthe lukhona uhlelo lokuthi othisha bathumele iziqu zabo ukuze ziqinisekiswe ukuthi kazinawo yini ugcobho.
Previous articleUHunt unengekile behlulwa yiPirates
Next articleIgcine ibuyile imiphumela kaMadisha